Ny trano Malagasy
Le 9 mai 2014, 07:45 dans Humeurs • 0
Ny atao hoe trano dia toerana amboarin' ny olombelona hataony fonenana, mipetraka amin'ny fototra, misy rindrina efatra sy varavarana, varavarankely, ary voarakotra tafo. Atao hoe trano ihany koa ny orin-javatra ataon'ny olombelona na ny biby ho fonenana.
Ny Ntaolo Malagasy dia nijery ny fizotran’ny masoandro taminy fanorenana ny tranony.
Zava-dehibe eo amin’ny Malagasy ny fanajana ireo fomba maro efa narahin’ny razana tany aloha. Ny tsy fanarahana izay fomba izay dia noheverin’ireo mpandala ny maha Malagasy fa miteraka tsiny. Noho izany dia nanantona mpanandro izy ireo alohan’ny hanorenany trano. Nangataka tsodrano amin’ny razana ihany koa ireo mpiasa mpanorin-trano alohan’ny anomboany ny asa.
Amin’izao fotoana izao dia maro ireo izay manaraka ny fomba kristianina rehefa manorina sy managana trano.
Le 9 mai 2014, 07:43 dans Culture • 0
Antananarivo no tsara trano ka Ivakiniadiana no sola vantony.
Ny soa ho an' ny sasany indraindray mitarika fahavoazana ho an' ny hafa.
Aza manao vazaha fito an-trano.
Aoka tsy hitady handidididy daholo ao an-trano.
Aza mitoto vary an-trano fohy loha.
Tokony hitsinjo izay mety ho vokatry ny atao, fa tsy hanaonao foana.
Lasa mpifosa vao mifafa trano.
Efa hitan' olombelona kilema vao taitra mitady hanatsara toetra.
Mitafa amin' ny mpanankarena ka raha tonga mitain-kidin-trano.
Izay mandany andro miresaka amin' ny mpanankarena, dia ho lany ny efa kely eo an-tanany.
Ny olona no maha-trano ny trano.
Tsy dia ny vatan-trano loatra no inona ao an-tokantrano, fa ny olona monina ao.
Tao trano tsy efan' ny irery.
Enti-milaza fa ny zavatra lehibe tsy vita raha tsy ifanakonana, ifanampiana, iaraha-manao maro.
Toy ny trano vaky vovonana ka mitondra teny mivoaka.
Ilazana izay tsy mahatam-bava ka milazalaza any ivelany izay tsy tokony ho fantatry ny olona.
Trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena hialofana.
Enti-milaza ny fifanampian' ny mpifanolobody rindrina.
Trano bongo misy ronono ka sarotra atao malahelo.
Na dia mahantra aza ny tokantrano, rehefa misy zavamamy ao, toy ny fifankatiavana izany na zavatra hafa mahahenika ny fo, dia ampy hahasambatra ny mitoetra ao.
Velona iray trano, maty iray fasana.
Enti-milaza ny tsy fisaraha-mianakavy.
Amoron' ala tsy manan-trano be
Enti-milaza olona mahantra kanefa eo afovoan' ny ilaina rehetra
Le 9 mai 2014, 07:42 dans Humeurs • 0
Maro karazana ny trano Malagasy ; ary izany dia miova arakaraky ny firafitry ny tafony sy ny akora nampiasaina nanamboarana azy.
ü Ny trano tomboka
Izy io dia trano tsy misy rindrina, na misy fa iva kely, ary ny tafony dia mitombina amin' ny tany.
ü Ny trano tsiotsiory
Natao tamin'ny rantsan-kazo madinika na ampanga ny rindrina ary notemerina tain'omby ny tao anatiny mba hitana hafanana tsara.
ü Ny trano feta
Tahaka ny trano tsiotsiory ihany ity trano ity saingy tany no nanaovana azy, izany hoe feta na tany nopetapetahana.
ü Ny trano tora-peta
Ny trano natao tamin'ny hazo norarina izay lalorina, atiny sy ivelany, amin'ny feta atoraka no antsoina hoe trano tora-peta.
ü Ny trano rotsopeta
Ny trano rotsopeta dia vita avy amin'ny fotaka. Ny tany mena no akora tena nampiasaina tamin'ny fanaovana io karazan-trano io.
Ny biriky dia vita tamin'ny tany mena ary ny lalotra dia natao tamin'ny tany mena sy tain'omby.
ü Ny trano terilatsy
Ny rindriny dia vita amin’ny volotsangana notorotoroina, ary ny zorony dia hazofisaka efa-joro.
ü Ny trano kotona
Ny mpanjaka tao Analamasinarehetra dia samy nanana ny lapany avokoa. Izy ireo dia trano kotona na trano hazo tsotra ary tsy nifankaiza tamin’ny tranon’ny mponina sarababem-bahoaka manodidina. Vita amin’ny hazo izy io.
ü Ny trano tafondro
Ny trano tafondro dia trano nitsatoka loha.
Avy tany Azia atsimo-atsinanana tany no niavian’ny tandrotafo. Raha ara-bakinteny, ny fiantsoana azy any dia midika hoe « voa ahitantsoa ». Any amin’ny faritra Somatra Indonezia kosa dia ny tandrotafo dia midika hoe « fandresena », mety ho tandrok’omby no anaovana azyamin’izany. Fa ny hevitrin’ ny tandrotafo lehibe indrindra dia « firariantsoa » : hahazo taranaka vanona, hidiran-karena… Misy karazany roa izy io : ny tandrotafo tokana sy ny tandrotafo roa mifampiditra.
ü Ny trano falafa
Ny trano falafa dia anisan’ny karazana trano hita any amin’ny faritra Atsinanana. Ny trano falafa dia vita amin'ny Ravinala.
Ny gorodony dia vita avy amin'ny hazo fisaka malefolefo sy maivamaivana nalaina tamin'ny vatan'ny ravinala, izay atao hoe « rapaka ». Ny rindrina sy ny fefy kosa dia natao tamin'ny tahom-be ny ravin-dRavinala maina atao hoe « falafa ». Ny rafitra kosa dia voarakotra amin'ny ravin-dRavinala maina sy mivelatra norandranina atao hoe « raty ».
Mora sy haingana ny fanamboarana ny trano falafa ary tsy mandany vola be. Tsy mahatohitra ny rivotra mahery anefa izy io.
ü Ny trano tafo bozaka
Mazava fa vita amin’ny bozaka toy ny asehon’ity sary ity ny tafon’ilay trano.
ü Ny trano biriky
Taty aoriana voa nisy trano vita amin'ny biriky tanimanga nodorana ka nanome endrika toy izao. Any ambanivohitra , itony trano itony dia antsoina hoe « trano vato ».
ü Ny trano tilikambo
Izay trano natao avo ka nasiana rihana volotsangana no nantsoina hoe trano tilikambo.
ü Ny trano hava
Ny trano hava dia tsy nasiana rindrina fa zoro sy lavany ary sakany fotsiny mba hipetrahan'ny lohany.
ü Ny trano tataro
Io karazan-trano io dia vita tamin’ny tafo marin-tampona vonjimaika.
Je vous invite à lire et apprécier mes écrits sur les maisons malgaches d'auparavant.
9 mai 2014 Famaritana
9 mai 2014 Ohabolana
9 mai 2014 Ny karazan-trano
9 mai 2014 Ny fitaovana fanaovan-trano
9 mai 2014 Firaritrin'ny trano Ntaolo Malagasy